नेकपा एकता : नेतृत्वबीचकाे विवाद उत्कर्षमा
#नागरिकता संशोधन विधेयक
#खप्तड बाबा कुटी
Saturday, December 14, 2019 | शनिबार, मंसिर २८, २०७६
कृष्ण गिरी काठमाडौं, १८ असार
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी(केन्द्र)बीच एकता भएको १३ महिना बित्दै छ । ३ महिनामा सकिने भनिएको एकता १३ महिनामा पनि उस्तै छ ।
नेकपाको एकताले पूर्णता नपाउँदै विभाजनको खतरा देखिएको छ । नेकपाका नेताहरु अहिले जति बाहिरी काममा सक्रिय छन्, त्यसभन्दा बढी आन्तरिक गुटको तयारीमा जुटेका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी एकताको तयारी अथवा १७ असोज २०७४ मा जसरी राजधानीमा मोर्चा बनाएर सबैलाई चकित पारेका थिए । त्यो स्पिडमा पार्टी अब अगाडि नजान सक्ने अवस्थामा नरहेकोे नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । ती सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा फाटो आउँदै छ । जुन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि र नेपाली जनताका लागि धेरै ठूलो क्षति हुने छ ।’
विवादको सुरुवात नेतृत्वबाट
एकता घोषणा सभामा दुई अध्यक्षलाई पाइलटको संज्ञा दिएका केपी शर्मा ओलीले एक्लै जहाज उडाउन थालेपछि नेकपामा विवाद चरममा पुगेको अर्का नेकपाका स्थायी समिति सदस्यले बताए ।
‘एकता गर्दा जुन सहमति र सम्झौता गरेका थिए । दुवै अध्यक्षले ती सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीमा विग्रहको समस्या आउँदै छ । जुन कुरा दुवै अध्यक्षले थाहा पाइसक्नुभएको छ,’ ती नेता भन्छन् ।
नेकपाले एकता गर्दा तीन महिनामा सबै एकताका काम सक्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । तर, १३ महिना बिते एकता पूरा भएको छैन । प्रदेश कमिटीबाट नै अध्यक्ष केपी ओलीले बलमिच्याइ गरेको ठम्याई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को छ । प्रदेश कमिटीको एकतामा उनी त्यति बोलेनन्, जति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीको विरोधमा बोले ।
प्रदेश कमिटीको एकतामा मापदण्ड बनाएर जाने भने पनि ओलीले त्यसलाई लत्याएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधन नेपाल असन्तुष्ट छन् । नेपालले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरे पनि प्रचण्ड भने त्यस बेला बोलेनन् ।
उनीहरुको असन्तुष्टि सचिवालयमा भएको छलफलअनुसार मापदण्ड बनाउने र एक व्यक्ति एक पद दिने सहमति अर्का अध्यक्ष ओलीले एकलौटी तोडेको भन्नेमा रहेको प्रचण्ड निकट नेताहरुको दाबी छ ।
जिल्ला कमिटीको एकतामा ढिलाइको कारण ओली
नेकपाले प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिव, इन्चार्ज र सहइन्चार्जको घोषणा गत वर्ष ५ असोजमा गरेको थियो । पार्टी एकता भएको चार महिना पछि प्रदेशको नेतृत्व तोकेको थियो ।
प्रदेश कमिटीको नेतृत्व छानेको ७ महिना पछि जिल्ला कमिटीको घोषणा भयो । तर, यसमा पार्टीमा भागबन्डा नमिलेर भन्दा पनि ओलीले छुट्टै रिपोर्ट तयार गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई खटाउँदा ढिला भएको नेताहरु बताउँछन् ।
ओलीले अनुसन्धानलाई जिल्लाका नेकपाका कार्यकर्ताको लिस्ट बनाउन लगाउँदा जिल्ला कमिटीको एकतामा ढिला भएको नेकपाको उच्च स्रोतको दाबाी छ ।
आ–आफ्नै तयारीमा ओली–प्रचण्ड
नेकपाका दुवै अध्यक्ष अहिले आन्तरिक रुपमा आ आफ्नो तयारीमा लागेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली नफर्कंदै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालोको कुरा टिभीमार्फत बोले ।
भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा नै गए हुन्छ कसैले रोक्दैन भनेपछि प्रचण्ड नयाँ बाटोको खोजीमा लागेको उनी निकट एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘अब यसरी नै त कति दिन बस्न सकिन्छ र भन्ने अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ । के हुन्छ, हेदै जाऊँ ।’
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने मुडमा ओली
नेकपाका दुई अध्यक्षले दुई जना साक्षी राखेर एकता हुँदा गरेको पाँच बुँदे सम्झौता अहिले धरापमा परेको छ । ओली आफू र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको ५ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने तयारीमा लागेको प्रचण्ड निकट नेताको बुझाइ छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले माधवकुमार नेपालको परीक्षणको समय आएको बताउन थालेका छन् । प्रचण्डले नेकपाका युवा नेताहरुसँग अब नेपालजीको परीक्षणको समय आएको बताउन थालेका छन् । नेपाल हामीतर्फ आउँछन् अथवा ओलीतर्फ जान्छन्, छिनोफानो हुने समय आएको बताउन थालेका छन् ।
नेपाल र ओलीको इतिहास हेर्ने हो भने नवौं महाधिवेशनभन्दा अरु समयमा उनीहरू फरक फरक समूहमा देखिएका छैनन् । त्यसकारण, अझै पनि नेपाल ओलीलाई छोड्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाे तत्कालीन एमालेका युवा नेताहरुले प्रचण्डलाई सुनाउन थालेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । नेपाल पनि अहिलेसम्म खुलेर ओली प्रचण्ड कसैसँग नजिकिएका छैनन् । आन्तरिक रुपमा भने प्रचण्डसँग बढी छलफल गर्ने गरेको उनी निकट नेताले बताए ।
नेतृत्व लिँदै सुरेन्द्र पाण्डे
माधवकुमार नेपाल खुलेर प्रचण्ड समूहसँग नआए त्यो समूहको नेतृत्व गर्न अहिले आन्तरिक रुपमा सुरेन्द्र पाण्डे लागेको बुझिएको छ । पाण्डे अहिले प्रचण्डसँग खुलेर लाग्ने र आगामी महाधिवेशनदेखि पार्टी विभाजन हुने अवस्था आए पनि सँगै जाने गरी संगठनको नेतृत्वको तयारी गरिरहेका प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।
प्रचण्ड नेपाल दुवै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा
प्रचण्ड र नेपाल दुवै नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा भएका कारण मिल्न सक्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । नेपाल पनि प्रचण्डसँग मिल्दा आफू प्रधानमन्त्रीमा सुनिश्चितता चाहन्छन् । तर, प्रचण्ड नेपाललाई तत्कालै प्रधानमन्त्री दिने मुडमा छैनन् । उनी पहिला आफू प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । नेपाल पनि आफूले प्रचण्डलाई सहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । दुवै नेताको चाहना बाझिएपछि उनीहरू एकआपसमा निकट हुन सकेका छैनन् ।
तीन जना नेताको व्यवस्थापनमा प्रचण्ड
प्रचण्ड आन्तरिक रुपमा तीनजना नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर तयारीमा लागेको बुझिएको छ । आफू, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम । प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । आफू पछिको दोस्रो तहमा नेपाललाई राख्न चाहन्छन् । वामदेव गौतमलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने सोचसहितको खाका आन्तरिक रुपमा बनाउँदै गरेको बुझिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १८, २०७६, १०:५३:००
हैदराबाद इन्काउन्टर : प्रहरीकाे 'कहानी' कति विश्वसनीय ?
मुम्बई : ‘चेली बेच्ने’देखि नेपालीको सपनाको शहरसम्म
दूधको मूल्य भदौदेखि बढ्ने, प्रतिलिटर ८ रुपैयाँसम्म बढ्ने
यस्तो छ विप्लवको नयाँ संगठनात्मक संरचना
५० स्थानमा उपनिर्वाचनको तयारी सुरु
कार्यकर्ताको जाँच लिन आफैं जाँच दिँदै छन् ४ नेता
वैचारिक मिलन कि संगठनात्मक चातुर्य ?
तीन दिनको म्याद थप गरी सिद्धबाबालाई फेरि विराट नर्सिङ होममै राखियो
आज दिनभर : कालापानीका फाैज फिर्ता लैजाऊ, वामदेवलाई नेता बनाऊ
गढीमाईमा बलि चढाइएका प्राणीप्रति श्रद्धाञ्जली
मौसम बदलीः उच्च पहाडमा हिउँ, तराईमा शीतलहर
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलद्वारा विभिन्न आयोजनाको निरीक्षण
मेयरको मृत्यु भए एक दिन शोक बिदा !
सडक महोत्सवको निम्तो दिन पोखराको टोली जनकपुरधाममा
गुरु नानक मठमा किन छिरे सिद्धबाबा ?
यसरी पक्राउ परे ८० करोड ठगी गर्ने 'नटवरलाल'
राजदूतको ह्वीस्की उपहारले विवाद !
पोर्नोग्राफी हेर्नेहरूबारे देखियो यस्तो भयावह अवस्था
'ममी ! म अब स्कुल जान सक्छु ?'
कोठामा भेट्न बोलाएर प्रेमीको लिंग छेदन
सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ !
सिन्धुपाल्चाेक केन्द्रविन्दु बनाएर ४.८ रेक्टरकाे भूकम्प
लिपुलेक जोगाउन उर्लिए विद्यार्थी